सुन्दरीहरुको अपराध - Younka Kura
एजेन्सी । पुरुषहरुको कमजोरी नै महिलाको सौन्दर्यता हो । किनकी सुन्दरीहरुको रुपले जो कोही पनि मोहित हुन सक्छ । आफ्नो सुन्दरतालाई हतियार बनाएर अपराध गर्ने अपराधी सुन्दरीहरु जसको कर्तुत थहा पाए पछि भने घृण जागृत हुन सक्छ ।
यौटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने केही केटीहरुलाई खराब केटाहरु निकै मन पर्छ । यदी यसो हो भने के पुरुषहरुलाई पनि खराब केटी मन पर्छ त ? जे सुकै भए पनि यी खतनाक सुन्दरीहरुको अपराध देख्दा उनिहरुको सौन्दर्यतामा तुवाँलो देखा पर्छ ।
१. एस्टीबलिज क्यारान्जा (Estibaliz Carrenza, Austria)
अष्ट्रियाकी ३६ बर्षीय एस्टीबालिज क्यारान्जा एक आइसक्रिम सप चलाउथिन । सुन्दर अनुहार भएकी एस्टीबालिज एक दिन आफ्ना श्रीमान र प्रेमीलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपम पक्राउ परिन । यी सुन्दरीले दुई बर्षको अवधिमा आफ्नो पति र प्रेमीलाई हत्या गरेकी थिइन । हत्याको क्रममा उनले आइसक्रिमको मेसिनको आवाजलाई ठूलो बनाए उनले गोलीको आवाजलाई दवाउने कोशिस गरिन र शवलाई टुक्रा टुक्रा पारिन । त्यति मात्रै कहाँ हो र उनले मृतक शरीरको बाँकी हिस्सालई आइसक्रिम बनाउने भाँडोमा राखेर डिपफ्रिजमा जमाईन र घरकै स्टोरमा गाडिन । त्यतिको लागि पनि उनले सिमेन्ट घोल्ने क्लास लिएकी थिईन ।
२ .एलेक्सिस नियर्स ( Alexis Neiers, United States)
एलेक्सिस नेइर्स प्रख्यात “ब्लिङ रिङ” ग्रुपकी सदस्य थिईन । सेलिब्रिटीका घरमा चोरी गर्ने कार्यको लागि उनले हलिउडमा नाम बनाएकी थिइन । सायद यो सर्वसाधारणको सेलिब्रिटीहरुलाई सामान्य मानिसको रुपमा हेर्न नसक्ने दोष पनि हुन सक्छ तर उनलाई उनको यो अपराधको लागि सबैले क्षमा दिए । हलिउडले पनि उनलाई माफ गर्यो । तर हाल एलेक्सिसले लागु औषधको प्रयोग तथा अन्य अपराधिक गतिविधिहरु त्यागेर एक प्यारी आमा बनेकी छिन ।
३. स्टेफनी बुडोईन ( Stephanie Boudoin, Canada)
२१ बर्षीया नर्सिङकी बिद्यर्थी स्टेफनी अपराधका कारणले मात्रै हेडलाईन बनिन् बरु उनका नक आउड सेल्फीहरु पनि निकै चर्चामा रहे स्टेफनीलाई ४५० घरमा चोरीको आरोप लागेको छ । त्यहाँको स्थनीय पत्रकारले सामजिक सञ्जालमार्फत उनका ब्यक्तिगत तस्विरहरु पनि समाजचर संगै प्रकाशन गरेपछि ती फोटोहरु निकै चर्चित बने । उनको बारेमा हरेक ठाँउमा चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । एक बेलायती ट्याब्लोइड पत्रिकाले उनलाई संसारको सबैभन्दा सेक्सी क्रिमिनल भनेर नै समाचार छापेको थियो ।
४. हेली वे (Haeli Wey, United States)
(USE THIS PHOTO ) Former Westlake High School teacher Haeli Wey pleaded guilty to two counts of an improper relationship with students in an agreement with prosecutors at her prearranged court date Friday morning in Judge P. David Wahlberg’s 167th District Court February 3, 2017. She is scheduled to return March 10 for official sentencing.
वेष्टलेक हाई स्कुलमा एकदिन एकाएक हेलीले उनका केही विद्यार्थीहरु संग रात रंगिन पारेको हल्ला चल्यो । यसै आरोपमा गणितकी शिक्षिका हेली २०१५ डिसेम्बर १७ मा पक्राउन पनि परिन । दुई पीडित विद्यार्थीले यो कुरा सही भएको बताए र यो कार्य महिन दिनदेखि चल्दै आएको खुलाए । हुन त दुवै पीडित विद्यार्थीहरु १७ बर्ष उमेर पार गरिसकेका थिए तर अमेरिकाको टेक्सास राज्यको कानुनले शिक्षकले बिद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध राख्नुलाई गैरकानुनी मान्दछ ।
यसको बारेमा तब मात्रै सबै कुरा बाहिर आयो जब एक पीडित विद्यार्थीले उनका एक साथीसँग यो कुरा सेयर गरे । त्यसपछि मात्रै उनलो आफ्ना अभिभावकलाई हेलीको कर्तुतको भिडियो प्रमाणसहित जानकारी गराएका थिए र हेलीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाईयो ।
५.एमण्डा नोक्स ( Amanda Knox, United States)
TODAY — Pictured: Amanda Knox appears on NBC News’ “Today” show — (Photo by: Peter Kramer/NBC/NBC NewsWire)
एमण्डा नोक्सको फोटो जब २००७ मा समाचार पत्र मार्फत सार्वजनिक भयो तब उनीले अफ्नै रुममेटको क्रुर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । सो समयमा उनी इटालीमा पढाई गर्थिन । त्यहाँ बस्त एक अर्का बिद्यार्थी संग उनलेकोठा सेयर गरेकी थिइन । एक दिन एक युवकको हत्या भयो । त्यसको केही दिनपछि एमाण्डा र उनका प्रेमीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । सन २०११ मा अदालतले उनलाई निर्दोष सावित गर्यो र उनी अमेरिका फर्किइन । तर त्यसको ३ बर्ष पछि अदालतले अर्को फैसला गर्दै उनलाई २८ बर्षको कैद सजाय सुनायो ।